Ny fahafatesan’ilay mpikatroka Trans iray no nampiseho fa mbola ela vao ho tapitra ny herisetra mihatra amin’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Ny fahafatesan'ilay mpikatroka Trans iray no nampiseho fa mbola ela vao ho tapitra ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy
Nandika (en) i Nacho
Voadika ny 31 Oktobra 2015 13:32 GMT
Tsy mila “famonoambehivavy” intsony. Sary avy amin'i Lunita lu mpisera Flickr ambany lisansa Creative Commons.
Hita tao an-tranony tamin'ny 13 oktobra ny vatana mangatsiaka an'i Diana Sacayán. Mpikatroka mpandala ny zon'ny niova fitaovam-pananahana i Sacayán ary mpandrindra ny Hetsi-Panafahana Manohitra ny Fanavakavahana. Nilaza ny polisy fa nisy ny marika fifampitolomana, izay mahatonga ny ahiahy fa nisy namono izy.
Diana Sacayán: Adidinay ny manamaro ny tolonao.
Sacayán no Arzantiniana trans-vehivavy voalohany nahazo karapanondron'ny firenena vaovao, izay manaiky ny zo hisafidy ny mahalahy/mahavavy. Nahazo io zo io izy taorian'ny fahalanian'ny Lalàna Trans Quota, izay mametraka fa ny sehatry ny asam-panjakana ao amin'ny Faritanin'i Buenos Aires dia tsy maintsy mampiasa farafahakeliny iray isanjato avy amin'ny vondron'olona hiova ho lahy/vavy, sarimbavy/sarindahy, lahy manao fitafiam-bavy na vavy manao fitafian-dahy.” Io lalàna io dia mihatra ihany koa amin'ny orinasa na sampan-draharaha izay an'ny fanjakana na ananan'ny fanjakana petra-bola.
Ny Vondron-Piarahamonina Pelaka Arzantiniana dia miampanga ny fahafatesan'ilay mpikatroka ho amin'ny antsoiny hoe “famonoana noho ny fankahalana”. Asongadin'ny fikambanana ihany koa fa nisy fito ny isan'ny fahafatesana voarakitra ho mitovy amin'ny toe-javatra tahaka izao tamin'ny 2014.
Vao tamin'ny volana lasa monja, ny fahafatesan'i Sacayán no fahafatesana “famonoanasarimbavy” fahatelo nihatra tamin'ny trans-vehivavy iray, araka ny fanambarana avy amin'ny Federasionan'i Arzantina Miaro ny Lesbiana, Pelaka, Biseksa ary Trans, izay ilazan'ny mpitondrateniny, Esteban Paulón, manao hoe:
Mbola mamono ny fanavakavahana, ary tsy milaza izany amin'ny tarehimarika izahay: maro ny tranga tahaka ny an'i Diana Sacayán, Marcela Chocobar, ary Coty Olmos, mampiseho amin'ny endrika mangidy ny fiantraikan'izany fanavakavahana izany amin'ny olona. Raha miatrika izao zavamisy izao dia tsy afa-mihodina mody fanina sy tsy manome fitaovana mahomby hananganana fiarahamonina mitovy tantana ny Kongresy.
Na i Marcela Chocobar na i Coty Olmos dia samy novonoina tamin'ny fomba mampihoron-koditra :
Rariny ho an'i Diana vehivavy fahatelo novonoina tao anatin'ny iray volana. Tamin'ity indray mitoraka ity ny mpikatroka #DianaSacayan — 1 amin'ny 10
Rohy: Diana Sacayán, ilay mpikatroka nahavita ny fametrahana ny asam-panjakana ny iray isanjato ho an'ny vondrom-piarahamonina trans. [Nsoratan'i Violeta Assiego (@vissibles) “Takianay ato amin'ny Fikambanana Lesbiana, Pelaka, Biseksa, Trans ary Interseksa Iraisampirenena sampana Amerika Latinina sy Karaiba ny hanazavan'ny ara-pitsarana ato amin'ny firenena haingana ny fahafatesan'i Diana Sacayán sy ireo maro hafa ao amin'ny LGBTI
Ao amin'ny media sosialy, mangotraky ny fahatafintohinana ihany koa ny mpiserasera amin'ny aterineto :
Trans mpitarik'olona Diana Sacayán inoana amin'ny fanomanana, mahay mampitokelaka. Hitany ny milaza fa mpikambana mavitrika ao amin'ny MAL – Hetsika Anti-fanavakavahana ho amin'ny Fanafahana – izy.
Na ny Filoha Arzantiniana Cristina Kirchner aza dia namoaka fanambarana tamin'ny fahafatesan'i Sacayán.
Ity raharaha ity ihany koa no fanararaotran'ny firenena hampahatsiahivana ireo fahafatesana maro tsy voazava, toy ilay mpitsara Alberto Nisman, izay nitarika ny famotopotorana ny fanafihan'ny mpampihorohoro nihatra tamin'ny AMIA. Hita faty tamin'ny heverina ho famonoan-tena i Nisman, ora maromaro alohan'ny hitondrany fiampangana ny Filoha sy ny mpikambana maro ao amin'ny antoko mitondra noho ny fanakonana ny mahatafiditra an'i Iran tamin'ny fanapoahana baomba nahafatesana olona tsy manantsiny 85 tamin'ny 1994 :
Takian'ny Filoha ny hampahazava ny nahafaty ilay mpikatroka trans Diana Sacayán/Nangovitra aho, nieritreritra aho fa i Nisman no noresahiny
Feminicides [famonoana vehivavy] 9 sy travesticide [famonoana sarimbavy na sarindahy] 1 tao anatin'ny herinandro tsy kisendrasendra fa tena hasiahana. Ampy izay! Amin'ny anaran'i Diana sy ny maro hafa, ao amin'ny 11 ao Viamonte 1147
Mandritra izany fotoana izany, miteraka adihevitra mafana ny fametrahana teny toy ny “feminicide” [famonoana vehivavy] sy ny “travesticide” [famonoana sarimbavy na sarindahy] :
Androany aho no nandre ny voambolana hoe “travesticide” [famonoana sarimbavy na sarindahy]. Be loatra ny fanomezana anarana manokana hampitombo ny fanavakavahana.
Mampiahiahy ahy ny “Travesticide” [famonoana sarimbavy na sarindahy]. Tsy haiko loatra hoe nahoana, tsy haiko na diso na marina, saingy maninona raha lazaina fotsiny izao fa “famonoam-behivavy” satria izay no izy?
Hatramin'ny 2008, dia mihoatra ny 1800 isan-taona ny vehivavy misy mamono ao Arzantina, araka ny Casa del Encuentro, ONG iray manampy ny lasibatry ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy. Tamin'ny volana jona lasa teo, ampolony ny olona nanao diabe nanavatsava ny araben'ny tanàndehibe mitondra ny tarigetra manao hoe #NiUnaMenos (Tsy Mihena na dia Iray aza) ho fanoherana ny famonoam-behivavy ao amin'ny firenena.